Analankinina Hopitalibe: vazaha iray very basy tao an-tranony - ewa.mg
Analankinina Hopitalibe: vazaha iray very basy tao an-tranony
News - Analankinina Hopitalibe: vazaha iray very basy tao an-tranony
Efa mampikolay ny mponina ao
amin’ny fokontany Analankinina Hopitalibe Toamasina ny
fahamaroan’ireo teratany vahiny manofa trano eny an-dalam-pasika
rehetra eny sy mody manangana fivarotana kely. Voalaza fa manambady
vehivavy malagasy izy ireo ary tsy tazonin’izy ireo fa rehefa vita
ny filan-dratsy dia roasiny avy eo ilay vehivavy. Toy izany hatrany
ny fomba fiainan’ny teratany vahiny iray mivarotra eo
amoron-dranomasina ao amin’ity fokontany ity. Raha ny fijoroana
vavolombelona nataon’ireo mahafantatra tsara ity teratany vahiny
ity dia misolosolo vady hatrany ralehilahy. Ny alatsinainy lasa
teo, nanao fanambarana tao amin’ny fokontany izy fa very ny basiny
tao an-tranony ka tsy fantatra izay naka azy. Ho an’ny fokonolona
ao amin’ny fokontany, manaitra ny tompon’andraikitra amin’ny
fahamaroan’ireo teratany vahiny tsy monina eny amin’ny trano
fandraisam-bahiny fa mody manambady vehivavy malagasy dia manofa
trano eny rehetra eny kanefa tsy miasa. Manoloana izany,
mampirongatra ny tsy fandriampahalemana izany satria miampy iray
indray ny basy eny am-pelatanan’ny jiolahy.
L’article Analankinina Hopitalibe: vazaha iray very basy tao an-tranony a été récupéré chez Newsmada.
Espoirs sportifs de Tuléar: hanangana kliobana volley ao Toliara
Ankoatra ny fananganana sy ny fanavaozana kianja, hiditra amin’ny fananganana klioba indray ny fikambanana Espoirs sportifs de Tuléar. Araka ny fanazavana nentin’ny filohan’ny fikambanana, i Vital Serge, ho tafatsangana amin’ny volana septambra na oktobra izao ny klioba Volley ball Est ao Toliara. Efa eo an-dalam-panangonana ny taratasy sy ny “conformité” ilaina amin’ny fananganana ity klioba ity amin’izao fotoana izao ireo mpisehatra ifotony any an-toerana, raha ny nambaran’ity filoha ity hatrany. Ankoatra izay, mitohy ihany koa ny fananganana sy ny fanavaozana kianja. Taorian’ny fahavitan’ny kianjan’i Mahavatsy, ny kianja Anketa indray izao no havaozina ka efa eo an-dalam-panamboarana izany ny tomponandraikitra any an-toerana. Tsy ny basikety ihany ny hahazo tombony amin’ny fampandrosoana ny tanora sy ny fanatanjahantena fa hisitraka izany avokoa ireo taranja rehetra ary mbola samy hahazo ny anjarany. Mi.Raz L’article Espoirs sportifs de Tuléar: hanangana kliobana volley ao Toliara a été récupéré chez Newsmada.
Andry Rajoelina : Rencontre avec Emmanuel Macron demain
Le président de la République rencontrera demain son homologue français Emmanuel Macron. L’entretien aura lieu demain vendredi 27 août à 16h30 (heure de Madagascar) au palais de l’Elysée à Paris, selon l’annonce faite par la présidence de la République française. Il s’agit de la deuxième entrevue officielle entre les deux chefs d’État après celle du 29 mai 2019. Cette rencontre peut évoquer les dossiers qui animent la coopération bilatérale entre les deux pays entre autres, la revendication sur les îles éparses, qui, visiblement, a refroidi la relation franco-malgache. Madagascar revendique la restitution des îles, mais cette option ne semble pas être la solution préconisée par la France. Rija R.L’article Andry Rajoelina : Rencontre avec Emmanuel Macron demain a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – «Chan 2019»Araka ny fantatra, hanomboka ny 12 jona ho avy izao eny amin’ny ivontoeram-piofanana eny Carion ny fampivondronana ireo mpilalao handrafitra ny Barean’i Madagasikara, hiatrika ny «Chan 2019». Lalao natokana ho an’ireo mpilalao tsy mpila ravinahitra. Raha tsiahivina, miatrika avy hatrany ny fihodinana faharoa ny Barea, amin’ity «Chan 2019» ity, ka hidona amin’i Mozambika. Hatao etsy Mahamasina ny lalao mandroso, ny 26 jolay, ary any Maputo, ny fihaonana miverina, ny 2 aogositra 2019.Karting FrantsaFaha-16 teo amin’ny filaharana ankapobeny Rajoely Matthieu, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa, amin’ny KZ2 “Long circuit”, ny faran’ny herinandro lasa teo. Nitondra ny Kart Zanardi izy tamin’izany, ary nahavita dingana tsara satria nahazo toerana 13 be izao, nandritra ny hazakazaka. Marihina fa mbola ao anatin’ny sokajy tanora i Matthieu. SaryLégende : Anisan’ny mpanamory efa manana ny lazany, i Matthieu. Nangonin’i TompondakaL’article Sombim-baovao a été récupéré chez Newsmada.
Namoy ny ainy noho ny vely maritoa teo amin’ny lohany ny lehilahy iray monina any Mariarano Maroantsetra, afak’omaly maraina. Voalaza fa nandositra namonjy ny biraon’ny kaominina ilay namono saingy maty niharan’ny fitsaram-bahoaka. Ny fianakavian’ilay maty voavely maritoa ihany ireto voalaza fa nifarimbona namono azy. L’article Vono olona est apparu en premier sur AoRaha.
Fambolena – fiompiana – jono: manana ny anjara toerana lehibe ny asa isam-pianakaviana
Nosokafana any Mahajanga, ny 13 jona teo, ny faha-10 taon4ny Famokarana eo amin’ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ataon’ny isam-pianakaviana. 13 tapitrisa ny tantsaha manerana ny Nosy ka manana anjara toerana lehibe amin’ny toekarem-pirenena ny asa isam-pianakaviana. 75 %-n’ny sakafo amidy eny an-tsena, miantoka izany ny mpamokatra tantanim-pianakaviana; manampy izany ireo vokatra ahodina, mbola avy amin’ny fianakaviana ny betsaka.Koa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny toekarem-pirenena ny asa ataon’ny fianakaviana tantsaha, saingy mitaky ezaka betsaka. Navoitra manokana ny famatsiam-bola, ny fampiofanana, ny fitadiavana sy ny fanohanana amin’ny lalambarotra. Fa olana nasongadina mahazo ireo tantsaha ireo ny fahazoana tany. Miankina amin’ireo teboka navoitra ireo ny fampandrosoana ny fambolena, ny fiompiana, ary ny jono.Maro anisa indrindra ny mivelona amin’ireo lalam-pihariana nefa misedra olana samihafa. Nambara tany Mahajanga fa raha mamokatra vary 200 kg fotsiny ny isam-pianakaviana tantsaha, ampy ny tolotra ho an’ny eto an-toerana. Miankina amin’ny politika ankapobeny faritan’ny fitondram-panjakana anefa izany, toy ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny famatsiana angovo … Midika izany fa minisitera maro mifampiankina fa tsy anjaran’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana sy ny jono irery. Mbola hisy any amin’ny faritra hafa ny fankalazana, hanaovana tomban’ezaka sy hamaritana rafitra vaovao. R.Mathieu L’article Fambolena – fiompiana – jono: manana ny anjara toerana lehibe ny asa isam-pianakaviana a été récupéré chez Newsmada.
Toamasina: hanao asa soa i Maminirina
Nakotrokotroka ny fety tetsy amoron-dranomasin’i Toamasina ny asabotsy teo noho ny fandraisana tamin’ny fomba ofisialy ny filoha nasionalin’ny fikambanana Mami, Maminirina Jean Eddy. Nitsabo tena tany ivelany, hatramin’ny taona 2014 ny tenany ka izao indray vao tafaverina eto an-tanindrazana. Vokany, faly ny vahoaka ka namono omby efatra ho nofon-kena mitam-pihavanana, niantsoana ny vahoakan’ i Toamasina. Na izany aza, tsy nanao fanambarana politika ny filohan’ny Mami. “Hamerina indray ny asa soa ho an’ny vahoaka isika. Misy ny fiaraha-miasa milamina sy mirindra amin’ny kandidà laharana faha-13 koa anefa eo amiko sy ny mpiara-dia aminay”, hoy izy. Nanolotra vola 300.000 ariary ho an’ i Lalaina, tovolahy mpikaroka olona atelin’ny ranomasina i Maminirina Jean Eddy. Anisan’ny fikarohana maty an-drano nataony farany ny fitadiavana ilay tovolahy tonga niasa letisia natelin’ny ranomasina ary hitany soa aman-tsara . Zanadrano rahateo ny lehilahy ka ambaran’ny maro fa tokony hiasa na koa omena asa eo anivon’ny vondron’ny mpamonjy voina ny tenany. Sajo L’article Toamasina: hanao asa soa i Maminirina a été récupéré chez Newsmada.
Analanjirofo – Tagnamaro: marobe ireo olona namaly ny antso
Tsy diso anjara tamin’ny fanatanterahana ny Tagnamaro Andron’ny olom-pirenena, ny asabotsy lasa teo, ireo distrika mandrafitra nyfaritra Analanjirofo. Hetsika notarihin’ny sampan-draharaham-paritry ny serasera sy kolontsaina. Ho an’ny tao Fenoarivo-Atsinanana, nodiovina ny bazary be ivelany sy anatiny. Nisy koa ny fanadiovana ny eo anoloan’ny Tranompokonolona. Sokajin’olona maro no tonga namaly ny antso.Nisy tamin’ireo mpandray anjara ny nijoro vavolombelona fa io Tagnamaro, natao ny asabotsy teo io, no nahavory olona indrindra, hatramin’izay nisian’ity hetsika ity tao an-toerana. Ho an’ny tao Soanierana-Ivongo kosa, nototofana ireo lavadavaka eo amin’ny toerana hanatanterahana ny matso, ny 26 jona izao.Tetsy ankilan’izay, nanamboatra lalana mirefy 800 metatra eo ho eo ny mponina tao Sainte-Marie. Lalana mampitohy ny fokontany Ankobahoba sy Ambohitra izy ity. Tao Vavatenina, fanadiovana ny tokotanibem-panjakana manodidina ny tranon’ny lehiben’ny distrika no nifanomezan-tanana. Nisy koa ny hetsika nataon’ny mpiasan’ny hopitaly tamin’ny fanadiovana lalana mihazo ny Hopitaly.Tsy diso anjara tamin’ny Tagnamaro, ny 15 jona teo, ny tao Mananara-Avaratra. Tao Maroantsetra kosa, noho ny fahafatesan’ny lehiben’ny distrika, tsy raikitra ny Tagnamaro izay tokony ho natao tamin’io andro io. Tsy maintsy hisy kosa izany amin’ny andiany manaraka, araka ny fampanantenana.SajoL’article Analanjirofo – Tagnamaro: marobe ireo olona namaly ny antso a été récupéré chez Newsmada.
Polisy : nodimandry ny minisitra teo aloha, i Amady Augustin
Nodimandry, omaly, teo amin’ny faha-79 taony, minisitry ny polisim-pirenena teo aloha, ny inspecteur général de police, Amady Augustin. Efa indroa nitàna io andraikitra io ny tenany ka isan’izany ny tamin’ny taona 1992-1993, nanomezana azy ny andraikitra maha minisitry ny Polisim-pirenena, sy ny taona 2002-2004, naha minisitry ny Filaminam-bahoaka ny tenany. Ankoatra izay, maro ny andraikitra efa nosahaniny teo amin’ny tontolon’ny Polisim-pirenena. Anisan’ny nampiavaka azy ny fikelezany aina teo amin’ny lafiny fanatsarana ny Polisim-pirenena malagasy ary nitandro hatrany ny hasin’izy ireo. Marihina fa, araka ny voalazan’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, tsy Covid-19 ny nahafaty ity raiamandreny teo anivon’ny Polisim-pirenena ity. Namela kamboty miisa roa sy vady iray ny tenany izao namoy ny ainy izao. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana izahay eto amin’ny gazety Taratra.Jean ClaudeL’article Polisy : nodimandry ny minisitra teo aloha, i Amady Augustin a été récupéré chez Newsmada.